The Nine Kasị akụda mmụọ Mejọọ Nke ahụ All Video Game Player Mee - News Ọchịchị
The Nine Kasị akụda mmụọ Mejọọ Nke ahụ All Video Game Player Mee
Si mistimed jumps ịzọpụta egwuregwu agazighị agazi, ebe a bụ Ịgba Cha Cha njehie anyị niile na-ugboro ugboro
Isiokwu a na-akpọ “The itoolu kasị akụda mmụọ emehie na niile video egwuregwu Player mee ka” e dere site Keith Stuart, n'ihi na theguardian.com on Friday 1st April 2016 08.04 UTC
E nwere ụfọdụ mmejọ na anyị na-eme riri. Anyị agaghị aka enyere onwe anyị. Ọbụna dị ka anyị na-eme ya, a akụkụ nke ụbụrụ anyị na iti mkpu: "Nke a bụ nnọọ ihe na-ezighị ezi dị na ya ime." Ma n'ụzọ ụfọdụ, Tupu anyị amara, anyị na-arahụ n'ihu mere ya; anyị zụta tiketi na-ahụ Batman v Superman.
Mgbe ụfọdụ, ihe ndị ahụ eme egwuregwu kwa. Ọ dịghị mkpa otú nwetara ị nọ n'ụlọ oku ọrụ, e nwere oge i chere na ị nwere ike wepụ ọtụtụ na-abata egwuregwu ozugbo site n'ikwu na ha na gị egbe na abụọ mgbọ na clip. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na na na-egwu tomb raider egwuregwu n'ihi na 10 afọ gị ka ga-mgbe ụfọdụ na-eje ije ruo a gigantic ọdịiche na-eche, M na-eche ma ọ bụrụ na Lara nwere ike ndụ na ọdịda? Na mgbe ahụ ị na-achọpụta na o nwere ike ọ bụghị. Na ndị ikpeazụ ebe nnyocha bụ ọtụtụ kilomita laghachi.
Ebe A, mgbe ahụ, ụfọdụ classic Ịgba Cha Cha njehie si kemgbe ụwa. Tinye gị onwe gị "ọkacha mmasị" na ihe ngalaba.
The ghọtahiere awụlikwa elu
A kpochapụwo Mario ọdịda. Foto: Nintendo
Nke a bụ archetypal platforming njehie: Ị maara na ị Egbula see awụlikwa elu ruo mgbe otu pixel nke Mario ụkwụ bụ na onu - ma mgbe ahụ, n'oge na ọsọ, ndị adrenaline kicks na, mkpịsị aka gị amalite twitching tupu gị ọbụna mara ya, ị na-na ịpị bọtịnụ … dị nnọọ n'oge, -eziga anyị moustached dike olulu n'abis. N'ihi na 24th oge. Ị sụọ ude kpamkpam eche ma ọ bụ ike snap a Super Nintendo njikwa na ọkara na gị iferi aka.
Na-awụ ọsọ nkuku
Volkswagon akwọ ụgbọala njehie si YouTube video, Gran Turismo V mkpọka
"Yeah, ya Aga-erikwa ịgakwuru a hairpin n'aka na 115mph mgbe ahụ kụrụ na breeki tupu onu ire, ò nwekwaranụ ihe … oo chimoo, ụgbọala m bụ a, dee-anya. "
The okpu agha game ngwakọta
Ị na a na-eme ka Ryu izu abụọ, ị maara ihe niile o isi Nkea, i nwere ike igosi ha na-enweghị ọbụna na-achọ na ihe njikwa. Mgbe ahụ, gị na nwunye na-abịa maka a Street Agha tournament, na ị na-niile njikere na gị na-agbawa obi ngwakọta agha, metụtara ọtụtụ nkeji iri na ise gburugburu, ibe na n'usoro nke punches. The oge na-abịa. Ryu ga-ebube. Ryu ga-emeri ha. Ryu ga … -eme a weird obere jerky agba egwú na ị na mgbe hụrụ tupu gị ọtụtụ awa nke ọzụzụ ahụ kpụ ọkụ. Ken kicks ya na ihu. Ken-enweta nkwanye.
The njem egwuregwu okwu mmebi
Hobbit, ubé gbanwere
"Ị bụ na a nga cell na Ogwe na ndị dị nnọọ abaghị afanyekwa n'etiti,"Na-ekwu na-akpali akpali ọhụrụ onyeōzi njem gị nke na ị dị nnọọ zụtara gị ZX ụdịdị dị iche iche. "On tebụl n'ihu gị bụ a karama kpọrọ 'shrinking ọgwụ'. Gịnị now?"N'ihi na izu, na i tinye dị iche iche ngwaa-noun n'ịgwa: ọṅuṅu ọgwụ, na-aṅụ ọgwụ, inu ọgwụ, quaff ọgwụ. N'ikpeazụ, dọtara gị sobs nke obi nkoropụ, na ndị ezinụlọ unu etinye aka. "Ị na-agbalị '-eloda',"Na-ekwu gị grandad na ekwentị site Hitchen otu abalị. Ọ dịghị ihe na ọrụ.
Iri atọ afọ mgbe e mesịrị ị na-ahụ egwuregwu na ihe emulator. Ị mara ya, pịnye ke "ilo ọgwụ", na ị na-site na ụlọ nke ọzọ n'otu ntabi. Ị ekporopụ na monitor ruo ọtụtụ awa na-eji nwayọọ ugboro ka onwe gị, "M egbughị m bụ nwata".
The lanarị egwu, ụjọ jidere
-E si YouTube video, Resident evil 2 Zombie nēru nbì
Ọ dị mma, ọ bụ ihe niile dị mma. I nwere ise mgbọ, ị nwere gị mma, na ọ bụrụ na ihe ọ bụla ọnyá gị, e nwere atọ medipaks laghachi n'ebe ahu na antechamber. Ọ bụ n'ụzọ zuru okè mma na-aga n'ime a unexplored ebe na- … iju Zombie! Oh ụtọ Jesus, ihe bụ ebumnuche button? Kedu ihe bụ ebumnuche button?! Oh dịghị, ị na-onwem na nku duster kama nke egbe - gịnị mere i ji ọbụna nwere na gị yiri nkata? The zombie na-gbaa n'onu ya nso. Ọ bụrụ na i nwere ike ikpokọta na egbe na … ọ gaala kemgbe.
The bombu nke ụfọdụ Rome
Oku ọrụ bombu ida
Ị na-egwu na-akpọ oku nke Honor: Modern Ịlụso. "Hey m nwere ike wepụ a dum roomful nke ndị iro na a bombu," ị chere. "M dị mkpa ka praịm ya na … echere ihe bụ otutu button? Ehee, ọ bụ ya. Ọ DỊ MMA, eri ihe a! Oh dịghị, ndị bombu ka bounced anya a na mbụ-adịghị ahụ anya Ọdịdị dị n'elu isi m na ugbu a na dina n'akụkụ ụkwụ m. M na-enwe oge ịtụtụrụ ya na-atụfu ya ọzọ?" [Olu dara ụda mgbawa] "Ọ dịghị. Mba anaghị m."
Agwa nhọrọ ụta
A Concert site Lorenzo Costa. ọmarịcha sere, lousy agwa klas.
ị na- 20 awa n'ime a buru ibu ọrụ na-egwu njem isiokwu ya Final Dragon akuko ifo na Asaa. Na mmalite, egwuregwu ka ị họrọ si a ọnụ ọgụgụ nke dị iche iche agwa ọmụmụ; ị pụrụ esiwo maka dike, maara ihe Sage, Eagle-eyed ọkà n'ịgba ma ọ bụ atụ egwu Warlock. Ma unu. Mmetụta impish na Kama, ị họọrọ "na-awagharị awagharị ọkpọ-ubọ ahu". Ugbu a, ihu a gigantic Ọkwa 40 hell dragon onye ọkụ na-enwu ume ka ebibie a nnukwu obodo, mkpebi gị na-achọ nnọọ obere na-atọ ọchị. Ị emecha na ịchọ gị ike pụrụ iche n'ihi na nke kasị kpaa nhọrọ. Ọ na-abụ "plaintive ballad". ọ ada ada.
The egbu oge game ịzọpụta ọdachi
Oregon nzọ ụkwụ Foto: Oregon nzọ ụkwụ
I nwere ike maa-esi gafee nke a na ngalaba nke egwuregwu tupu na-azọpụta, ọ ga-enweghị nsogbu. Echere m, niile i nwere ime bụ gbuo anụ orc agha, mgbe ahụ Dodge nsi àkú afia, mgbe ahụ-na end-of-larịị onyeisi nnukwu anụ mmiri.
Ma awa anọ ka e mesịrị, na onye isi egbu unu - na naanị a sliver of ahụ ike hapụrụ na ya na ndụ nlele. "Malitegharịa ekwentị site ikpeazụ ịzọpụta?"Sneers egwuregwu menu. Ụfọdụ akụkụ nke ụbụrụ gị-enye gị ohere nrọ ka ị na- mere suru ịzọpụta, nri mgbe na-egbu na 300th orc warrior.
Mgbe ahụ egwuregwu malitegharia. Na mmalite nke na ọkwa. Ị nwụrụ a teeny bit n'ime.
The showboat ka hell
Si YouTube video, FIFA 15 Mgbawa gbara ida
Ọ bụ ihe ikpeazụ ole na ole sekọnd gị FIFA 16 egwuregwu n'etiti Norwich na Barcelona. The akara bụ 1-1, ma gị striker na-ebo n'ebe Barca ntaramahụhụ igbe na-enweghị agbachitere dị nso na a doo anya na ogbugba on mgbaru ọsọ. Ị na-achọ na-agbachitere Njikọ aha azụ East Anglia, ma ihe ị na sekọnd n'ebe eti ezigbo enyi gị na-mgbe niile na-arụ dị ka Barcelona - na mgbe niile-enweta nkwanye. Ma ọ bụghị nke a oge. Ọ bụghị a oge, Messi. Ọ gwụchala, ọ bụ … hey, gịnị mere na-mgbawa ndị eche gọọlụ? Ọ bụ gbanyụọ ya akara, ọ na-foundering, ị maara nri buttons - ihe ụzọ ka mma isi gosi ịdị ukwuu nke gị abịanụ nweta? Ha ga-ekwu okwu banyere nke a n'ihi na afọ. Ị pịa nkà Eme button na oge ịse.
Na na obi ụtọ ahịa n'elu obe mmanya. The igbu efega. Mgbe mmezi oge, Norwich tụfuru on penalties. N'ihi na ike nke izu, mgbe ọ bụla òtù ọlụlụ gị na-ahụ gị na-eri, ọ na-ajụ: "Ì chọrọ ibe na na?"I chere ma eleghị anya na nke a enyi, kwụsịwo. Ọzọkwa, ị nwere ike mgbe igwu egwuregwu vidio ọzọ.
Star Wars: The Force na-akpọte mbụ Jeremaya mere
22388	8 Nkeji edemede, Culture, Atụmatụ, Game omenala, Games, Keith Stuart, Nintendo, PC, PlayStation, ochie egwuregwu, Ọrụ na-egwu egwuregwu, Gbaa 'em acha ọkụ, Technology, UK Technology, Xbox
← Top 20 iPhone na iPad Égwu na Games nke ọnwa Logitech Harmony J.Randall Review →